Iphupha elinophawu lomhlathi ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Njengomgaqo ngokubanzi, imithetho kunye nezivumelwano zahlulwe zayimihlathi. Ngesi sizathu, uphawu lomhlathi luphawu olusemthethweni. Xa sibona enye yezi, sinokucinga kwangoko ngemigaqo, ukumanyelwa kwenkundla, okanye amagqwetha anezambatho ezibanzi ezimnyama.
Umqondiso womhlathi unokuba nentsingiselo enzulu. Oku kuyinyani xa siphupha ngaye. Kwenzeka ukuba ephupheni nathi sibhale umqondiso onjalo okanye siwubone kwindawo ebonakalayo. Ukuba umntu uwatolika la maphupha, ireferensi yomthetho ihlala ihleli.
1 Uphawu lwephupha «uphawu lomhlathi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «uphawu lomhlathi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «uphawu lomhlathi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uphawu lomhlathi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba uphawu lomhlathi luyavela kumaphupha asebusuku, umzekelo, ukuba lubhalwe ephepheni okanye eludongeni okanye eludongeni, loo mntu kuthethwa ngaye unokukhathazeka ngokwenene ngalo. imicimbi yezomthetho. Kwiimeko ezininzi, nangona kunjalo, oku akuhlali kakuhle kutoliko jikelele lwamaphupha: endaweni yoko, uphawu lomhlathi lubonisa ukuba umntu ucinga ngokuthintela imithetho ethile kubomi bemihla ngemihla.
Umphuphi uyazi kakuhle ukuba kwezinye izinto akaziphathi ngokupheleleyo ngokuhambelana nomthetho, oko kukuthi, ngokusemthethweni. Oku akukwenzi ukuba uyitshintshe. Endaweni yokuba ukhathazeke ngokubanjwa kwaye angathanda ukufumana isisombululo koku, kodwa ngaphandle kokuyeka intuthuzelo yangaphambili yezenzo zakhe.
Nangona kunjalo, olu toliko alukho kuphela. Umqondiso womhlathi uphinde uphuphe xa umntu ekuthethwa ngaye eziva onwabile kubomi babo bemihla ngemihla. Uphawu lomhlathi kufuneka luqondwe ngokomfuziselo kule meko, lunentsingiselo efuziselayo: lubhekisa kwimisebenzi emininzi ekufuneka izalisekisiwe ebomini bokuvuka. Inani labo lisongela ukwanda kangangokuba i Isishwankathelo seLahleko. Awusazi ukuba uqale ngaphi kwaye ulwakha njani usuku lwakho ngendlela enentsingiselo.
Ukuba uphupha uphawu lomhlathi oluvela ngokunxulumene nekhontrakthi, oku kwamkelwe ngokubanzi Imbophelelekoisenokuthinteleka. Kwixesha elizayo elingekude, umntu ochaphazelekayo kufuneka alumke angakholiswa yiyo nantoni na.
Uphawu lwephupha «uphawu lomhlathi» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwendlela yokutolika kwengqondo, uphawu lomhlathi lubaluleke ngokukodwa njengophawu lokuphupha ukuba umntu ekubhekiswa kuye ubhala ngokwakhe. Oku kuzisa eyakho Ukuziva uxanduva ukubonisa. Umntu ochaphazelekayo uyayiqonda indlela afanele ukuziphatha ngayo nendalo yakhe. Oku kukwahamba noxabiso olukhulu ngenyaniso.
Ngakolunye uhlangothi, luphawu lomhlathi olibonayo ephupheni kwaye ungazizobi, usenokuba unayo Ukuzisola. Ngokoluvo lwee-psychoanalysts, uphawu ke lubonisa ukuba iphupha liziphethe ngendlela engalunganga. Uyakwazi oku, ubuncinci unokuthandabuza malunga nokuziphatha kwakhe. Lifikile ixesha lokuba ulungise iimpazamo zakho.
Uphawu lwephupha «uphawu lomhlathi» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwephupha lokomoya, uphawu lomhlathi lubonisa ukuba umntu ekubhekiswa kuye kuphuhliso lwakhe indlela eyiyo ifunyenwe.